PE, PP, PVC Ary ny tsipika fanamafisana ny takelaka vita amin'ny hazo - China PE, PP, PVC Ary ny mpamatsy tsipika fanamafisam-peo, Factory -Jwell
PE, PP, PVC Ary ny tsipika fanamafisana ny takelaka
WPC extrison line: Izy io dia mandray endrika manokana amin'ny visy & barika, bobongolo ary extruder ho an'ny vokatra plastika hazo. Andiam-bokin'ny orinasa jwell: andalana iray amin'ny lalana fantsom-baravarankely matevina, làlana iray amin'ny lalana fampidirana profil WPC; tsipika fantsom-panafody WPC ary karazana hafa Bobongolo WPC.
Ny vokatra WPC dia azo novokarina tamin'ny alàlan'ny masinina extrusion roa, na ny pelletzing voalohany avy eo tamin'ny alàlan'ny masinina extrison, hamonjy herinaratra sy toerana izy io, misy endri-javatra sasany: fivoahana avo, tsindry extrusion azo antoka, plastika avo, ary fifangaroana tsara. Ny famolavolana visy haingam-pandeha dia manana tanjaka kely fanapahana, ary tsy mora ny manapaka fibre hazo, plastika tsara. Ity tsipika extrusion ity dia afaka mamokatra vokatra piraofilina PE, PP na PVC WPC, ny fampiharana voalohany dia ny fitoeran-kazo, ny gorodona sy ny gorodona ary ny haingon-trano ivelany, sns.